प्रदेशको राजधानी बुटवल नै हुन्छ : पौडेल - Lumbini Times
748 views | लुम्बिनी टाइम्स संवाददाता | सोमबार, १८ मंसिर ।
विष्णु प्रसाद पौडेल,
प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेद्वार, रुपन्देही २ नेकपा एमाले
तपाई तेस्रो पटक चुनावमा उही क्षेत्रबाट उठ्दैहुनुहुन्छ । तपाईको उम्मेद्वारी किन ?
एउटा त हिजो शुरु गरिएका योजना अघि बढछन् । विकासका थप नयाँ आयामहरु गर्न बाँकी छ । बुटवललाई अब महानगर बनाउने योजना छ । मैलै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दा बुटवलदेखि सुनौलीसम्मलाई समेटेर महानगर बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थिए । सरकार परिवर्तन र केहि दलहरुको संकिर्ण मानसिकताका कारण महानगर बन्न सकेन । बुटवल, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर, सैनमैना, देवदह, ओमसतिया, रोहीणी, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकालाई समेटेर महानगर विकास परिषद बनाउनेछौं । त्यसले व्यवस्थित महानगर, देशकै नमूना महानगर बनाउनेछौं । बाटो, पानी, विजुली, पूर्वाधार विकास, शिक्षण संस्था, अस्पताल, यूनिभर्सीटी, अस्पताल, पार्क, औद्योगिक क्षेत्र कलेज, व्यापरिक केन्द्र, प्रशासनियक केन्द्रको रुपमा बुटवललाई स्थापित गर्ने मेरो संकल्प हो ।
अर्को रुपन्देहीलाई पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउन । रुपन्देहीलाई साँचिक्कै देशकै सुन्दर र आधुनिक शहरको रुपमा विकास गर्ने मेरो र हाम्रो गठबन्धनको अठोट छ । यहाँका अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासीहरुलाई अब कहिल्यैपनि लालपूर्जा विहिन भएर भौतारिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुछ । तिनाउमा कालिगण्डकी डाइभर्सन गर्ने योजना छ । समग्रमा रुपन्देहीको विकास लागि मेरो उम्मेद्वारी हो ।
तपाईले विगतदेखि नै प्रतिबद्धता गरेका केहि योजनाहरु पूरा भएका छैनन जस्तै ः झुम्सा खानेपानी आयोजना, सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने काम र सिद्धबाबा सडकको विकल्प वा सुधार गर्ने कुरा ? अब कसरी तपाईले पूरा गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ?
यो विचमा संक्रमणकाले गर्दा सरकारले काम नै गर्न पाएन । सरकार निर्माण गरेर काम गर्न खोज्दा सरकार परिवर्तन हुने अवस्था आयो । यसले निश्चयनै काम प्रभावित भएकै हो । जहाँसम्म यहाँले उठाउनुभएका बिषयहरु छन । अब यी समस्या समाधान हुन्छ हुनैपर्छ ।
विगतमा मैलै प्रतिबद्धता गरेको सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने काममा केहि अवरोधहरु भए । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । जतिखेर दलबहादुर राना भूमिसुधार मन्त्री हुनुभयो, त्यतिखेर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । त्यतिखेर भूमिश्वर ढकाल जिल्ला अध्यक्ष भएर काम अगाडि बढ्दै थियो । त्यतिखेर जग्गा बाडेर सिध्निे भयो भनेर मुद्धा दायर भयो, अदालत रोक्नु भन्यो त्यसपछि यो काम रोक्यो । कम्यूनिट मात्रै हो जसले भूमिहिनलाई लालपूर्जा दिएको इतिहास छ । यसर्थ अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीले लालपूर्जा पाउँछन यो मेरो प्रतिबद्धता मात्रै होईन आवश्यकता नै हो ।
सिद्धबाबाको सडकमा हुने जोखिमको अन्त्य हुन्छ । हामीले सुरुङ मार्गको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । यसको भौगौलिक अवस्था के छ यो प्राविधिक रुपमा सुरुङ मार्ग ठिक नभए अर्को विकल्प छ । त्यो के हो भने तल्लो सिद्धबाबाबाट तिनाउ नदीको माथि माथि जान्छौ र पाल्पा दोभानको प्रहरी चौकी नजिक निस्कन्छौं । यो विकल्पको सडक हो । यो काम अन्य देशमा पनि भइरहेको छ । सिद्धबाबाको सडक जसरी पनि सुरक्षित हुन्छ ।
२०५१ सालमा मोदनाथ प्रश्रित निर्वाचित हुनुभयो । त्यतिखेर सिस्नेखोला खानेपानी आयोजना शुरु भयो । त्यसपछि २०६४ मा म निर्वाचित भएपछि मैलै झुम्साखोला खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि योजना अघि बढेको हो । खानेपानी आयोजनालाई मैलै यो आयोजना शुरु गर्न भनिररहेको छु । खानेपानी आयोजनाले पूरा गर्न नसके विकल्प खोजिनेछ । यो कुरा मैलै भनेको छु । शुद्ध र पर्याप्त पानीक पाँच बर्ष होईन चाँडै आउँछ ।
तपाईले पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवल हुन्छ भनेर ठोकुवा नै गर्नुभा’छ तर तपाईकै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु प्रदेश राजधानी दाङ बनाउने भन्दैहुनुहुन्छ ? बुटवल राजधानी हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ?
पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाड र तराई अलग गराउने प्रस्तावलाई सदाका लागि अन्त्य गरेका छौं । हामीले सदन र सडकबाट संघर्ष गरेका थियौ । जहाँसम्म प्रदेशको राजधानी रुपन्देही हुनेमा कुनै शंका छैन । राजधानी भनेको ख्याल ठट्टाको बिषय होईन ।
यसका लागि पूर्वशर्तहरु हुन्छन् । भौतीक दृष्टिकोणले रुपन्देही अर्थात बुटवल उपयुक्त छ । प्रशासनीय सुगमता र प्रदेशका जनताको चाहना पनि यसको अर्को पूर्वसर्त हो । म तपाई मार्फत के भन्छु भने प्रदेशको दुई तिहाई बहुमतले रुपन्देहीमा राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित हुनेछ ।
यहाँहरुले बारम्बार हामीलाई विजयी गराउनुभएको छ । यहाँहरुको अमूल्यमतले म विजयी भएको हो । म आफूलाई जनताको सेवक हुँ । यो निर्वाचनमा म फराकिलो मतान्तरले विजयी गराउन सबै मतदाताले सहयोग गर्नुहुनेछ । मतदाताको आस्थाको अधिकारलाई सम्मान गर्छु । मैलै सबै चुनाव चिन्हमा मतदान गर्ने मतदाताको म सेवा गर्नेछु । बुटवललाई सुन्दर र विकसित शहर बनाउन, रुपन्देहीलाई नमूना जिल्ला बनाउनका लागि मलाई सहयोग गर्न अनुरोध छ ।